‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर २’ को सुटिंग आजबाट सुरु-
Home / समाचार / ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर २’ को सुटिंग आजबाट सुरु-
‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर २’ को सुटिंग आजबाट सुरु- 0
बाघी2को सफलता पछि, सबै उनको अर्को परियोजना मा जाने को लागि तैयार छ। अभिनेता कर्ण जोहर को घर बैनर धर्म प्रोडक्शंस को तहत पुतत मल्होत्रा ​​द्वारा2साल को विद्यार्थी को लागि शूटिंग शुरू हुन्छ। कण जोहरको विद्यार्थीको साल2मंजिलमा आज जान्छ। चलचित्रको तारा टाइगर श्रोफ, पहिलो फिल्म अनन पाण्डे र तारा सागरिया।
टोलीले अन्ततः आज बिहान मंगत पूजा पछि शूटिंग शुरु गरेको छ। पूर्व-गोली पूजाको तस्वीर हेर्नुहोस्: चलचित्र पुणित मल्होत्राद्वारा निर्देशित गरिएको छ। चलचित्रको पहिलो किशोरी वरुण धवन, अली भट्ट र सिद्धार्थ मल्होत्राको शुरुआतमा छ। SOTY2मा काम किकस्टार्ट गर्नु भन्दा पहिले, कराानले आइतवारमा मेमोरी लेनमा हिड्यो र SOTY को बारेमा मित्रता प्राप्त भयो। उनले ट्वीटर गरे, “बांड्रामा पुरानो धर्म प्रोडक्शंस कार्यालयमा हिंड्यो! यस ठोस ठाउँमा भएका सबै न्युयोर्कजीटिकहरू पाउनुभयो र यो मैले देखेको छु! तीन चम्किलो विद्यार्थीहरू! जब नयाँ भोलि सेट अप गर्दै जाँदैछन्! SOTY सधैँ मेरो लागि विशेष हुनेछ। ” उनले एक फोटो साझा गरे जसको पर्खाल तीन अभिनेताहरु को पोस्टर द्वारा अलारिएको छ – अली भट्ट, वरुण धवन र सिद्धर्थ मल्होत्रा ​​- जसलाई उनले फिलिम संग फिलिम को बलीवुड मा क्रिकेट शुरू गरे। फिल्मको विकासको स्रोत स्रोत नजिकको सोट2को विवरण दिँदै, “अनान्य र तारा सँगसँगै टाइगरलाई गोली हान्ने देहरादूनको नेतृत्व गर्नेछ। यो एक दुई-महिनाको तालिका हो जुन विदेशी स्थानीयहरू देहरादून, मुसोसो र ऋषिकेशमा पर्खाइनेछन्। त्यस पछि चालक दल दिल्लीको अर्को हप्ता लामो समयको तालिकामा हुनेछ। चलचित्रको एक प्रमुख भाग उत्तर मा गोली मार दी जाएगी, पछि केहि कलेज को अंश पुणे मा गोली मार दी। ” स्रोत थपियो, “देहरादूनको तालिका पछि, चालक दल मुम्बई फर्किनेछ र त्यसपछि पुणेलाई अर्को महिनाको लामो समय तालिकाको लागि फर्किनेछ। चालक दल एक नृत्य गीत को शूटिंग पनि गर्नेछन्, जो पहिले देहरादून अनुसूची देखि पहिले मुम्बई मा गोली मारने को लागि स्लिप गरिएको थियो। तर अहिले अनुसूचीमा केही परिवर्तन छ र गीत जूनमा गोली मारिएको छ। “